Barnaamijka Halgan iyo Halgamaa.
Feb 6, (2013 (QOL) Waa barnaamij cusub oo ka bixi doona haddii alle idmo war baahinta Qorahay Media Waxaanuna ku qeexi donnaa waa maxay halgan? Waa kuma halgamaaga dhabta ah?
Ugu horeyn halgan waxaa laga keenay kalmadda harjad ama rafasho ama lagdan iwm Waxaa lala lagdamayaa cadowga si looga soo dhiciyo xuquuqdii uu boobay. Halganku waa tab lagu gaadho xaqiijinta hadaf sare sida xoriyad iyo karaamo iyo cizzi ama cadowga oo dalka laga xoreeyo ama gumeysi dhul boob doonaya oo laga hortago.
Sidaa darteed halgamaanimadu ma aha tilmaaan qof walba iska sheegan karo waana sifo lagu tilmaami karo qofka muteystay oo kaliya mana aha in la siiyo qof aan la hubin inuu mudan yahay iyo in kale. Halgamaagu waa shaqsi buuxiyey shuruudaha looga baahan yahay halgamaaga waana shaqsiga cimrigiisa iyo noloshiisa u hibeeyey qaddiyaddiisa kadibna ku sugnaaday illaa uu ama kaga shihiidayo ama ka gun gaadhayo kama danbeysta guusha. Hadaba halganka waxaa loo qeybiyaa dhawrb nooc oo kala ah HALGANKA CASKARIGA AH: Waa kan lala galayo cadowga dagaal hubeysan si looga xoreeyo wadanka waana kan ugu caansan ee gumeystayaasha lagaga soo dhacsado xaqa shucuubta ay boobeen. HALGANKA SIYAASIGA AH: Waa midka lagu raadiyo xuquuq siyaasi ah waxaana mararka qaar lagu gaadhaa ujeedooyin gaar ah laakiin waxa la isku raacsan yahay inaanu u natiijo wanaagsaneyn sida halganka caskariga ah. HALGANKA FIKRIGA AH: Waa qaabka loo fashiliyo duullaanka maskaxda ee uu cadowgu ku doonayo inuu maskaxda kaga xado da,yarta si ay u qaataan afkaarahiisa gurracan waxaana ka qeyb qaata halganka noocan ah culimada iyo indheer garadka oo dadka bara taariikhdooda iyo caqiidadooda waana midka uu cadowgu ugu neceb yahay marka laga yimaaddo midka hubeysan Intaa kadib waxaan heleynaa natiijada ah 1. Halgamaagu ma aha ninka cadowga dhibaatada ka soo gaadho ama xabsi gala ama si kale loo waxyeeleeyo halganka dartii.
2. Ma aha in aan huwinno halgamaanimada cid walba oo maalmo inoo muxaadareysa annagoon miisaan dhab ah saarin waxyaabaha qofku mabaadi ahaan u xambaarsan yahay iyo dhaqanka uu umadda u gudbinayo sidaa darted waxaa qofka halgamaa ka dhigi kara ama u diidi kara waa qaab socodkiisa iyo caqiidadiisa wadaninimo ee uu ummadda ka gadayo. Waxaa odhan karnaa halgamaagu wuxuu u qeybsamaa labo qeybood oo kala ah Halgamaa daacad ah iyo halgamaa khaain ah.
Halgamaaga daacadda ah waa shaqsiga qaddiyaddiisa ugu shaqeeya sida ugu munaasibsan ee daacadnimada ah isagoo aan cidna uga baahneyn inay arrintaas ku karaameyso allaahna ajir uga raadsanaya.
Halgamaaga khaainka ah waa nin laga yabo in ummaddiisu halyey u taqaano isagu laakiin aan aheyn sidaas la moodayo waxaana dhacda in gumeysigu ku dhax abuurto xubnaha jawaasiis magaca halganka ku qadhaabta waxeyna halgan ugu jiraan sidey cadowga sir ugu gudbin lahaayeen waana halgaamaa marka laga eego dhanka cadowga oo wuu u halgamay in qaddiyaddiisa uu u dhibaateeyo maslaxadda cadowga iyo tiisa gaarka ah arrintaas waxey ka dhacdaa meel kasta oo uu halgan ka socdo gude iyo dibad intaba. Halgamaaga dhabta ah waa inuu ku sifoobo tilmaamaha halgamaaga waana in arrintaas la isku waafaqsan yahay mana aha inay shaqsiyaad gaar ah u aqoonsadaan inuu yahay halgamaa ee waa inuu ka heysto ummaddiisa dhammaan ay u aqoonsan tahay inuu halgamaanimo istaahilo.
Intaas waxaa noogu eg qeybtii koobaad ee barnaamijka aan ugu magac daray Halganka & Halgamaaga. wixii talo bixin ah fadlan noogu soo dir e-mailka qorahay99@yahoo.com Daljir Keyd Qorahay Media Kenya Part 1